भित्री बस्त्र कति महँगा लगाउँछन् नेपाली? - Naya Patrika
भित्री बस्त्र कति महँगा लगाउँछन् नेपाली?
महेश तिमल्सिना र नुनुता राई, काठमाडौं | भदौ २८, २०७४
सामान्यतया अरूलाई देखाउन र आफ्नो पर्सनालिटीका लागि मान्छेहरू महँगो कपडा लगाउँछन् । तर, बाहिरी कपडाहरू मात्र होइन, भित्री कपडाहरू पनि महँगा र ब्रान्डेडमै मोह बढ्दै गएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मका अन्डरवेयर र १० हजार रुपैयाँसम्म ब्रा नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । खासगरी नेपालका सेलेब्रेटीहरू इनर वेयरमा निकै ध्यान दिन्छन् । अन्डरवेयरको नेपाली बजार र सेलेब्रेटीहरूको रोजाइबारे महेश तिमल्सिना र नुनुता राईको (गज्जब)रिपोर्टः
photo : Amul Thapa/enayapatrika
जुलियट: यो इन्डियन ब्रान्ड हो । यो ब्रान्डअन्तर्गतको ब्रा धेरैजसो विवाहित महिलाले प्रयोग गर्छन् । जसको मूल्य ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यो ब्रान्डमा महिलाले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयर २ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ ।
जिन्ताना स् यो थाइल्यान्डको ब्रान्ड हो । यो पनि विवाहित महिलाले धेरै रुचाउँछन् । नेपालमा यस ब्रान्डका भित्री वस्त्र दुई हजारदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।
Follow @NunutaRai Follow @Mahes99554242